Talaalkii ugu horeeyay ee covid 19 oo soo gaaray Soomaaliya +Sawiro. | Weheliye Online
Talaalkii ugu horeeyay ee covid 19 oo soo gaaray Soomaaliya +Sawiro.
300,000 oo Kuuro (Doses) oo talaalka cudurka corona ah ayaa maanta soo gaaray Soomaaliya, wasiirka caafimaadka XFS Fowziya Abikar Nuur, wakiilka gaarka ah ee xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, James Swan iyo mas’uuliyiin kale ayaa goobjoog ka ahaa soo dejinta talaalka Oxford Astrazeneca.
Waa wajigii koowaad qeybta maanta dalka ay keentay hey’adda caafimaadka u qaabilsan Qaramada Midoobay ee WHO, guud ahaan talaalka COVID-19 ee Soomaaliya loogu talagalay ayaa ah 1.2 milyan oo kuuro.
Danjire James Swan, ayaa sheegay in wasaaradda caafimaadka ugu hambalyeeyaynayo helitaanka talaalkii ugu horeeyay ee cudurka corona ah, isagoo sheegay in Qaramada Midoobay ay sii wadayso taageerada Soomaaliya xilligan adag.
Waxaa uu sheegay in cudurka wali halis weyn yahay isla markaana loo baahan yahay in shaqaalaha caafimaadka iyo dadka nugul qaataan talaalka feejignaantana la sii wado, si loo xakameeyo feyraska.
Fowziya Abiikar Nuur, ayaa u mahad celisay dhammaan hey’adihii ka soo shaqeeyay in Soomaaliya uu soo gaarto talaalka cudurka coronavirus, xilli dalka uu ku jiro soo labo kacleynta feyraska corona.
Wasiirka caafimaadka Soomaaliya ayaa sheegtay in talaalka beri la bilaabi doono isticmaalkiisa laguna horeysiin doono shaqaalaha caafimaadka ee la dagaalamaya feyraska.
“Waan ku dadaalaynaa in aan caddaalad u gaarsiino talaalka inta na soo gaartay. Waa muhiim in talaalka ay la socoto wacyigelinta, sida kala dheeraado, afka la xirto, gacmaha la dhaqdo” ayay tiri Fowziya.
Waxaa xusid mudane, in 16 Maarso oo beri ah, oo talaalka isticmaalkiisa la bilaabi doono ay ku beegan tahay sanad ka hor markii kiiskii ugu horeeyay oo cudurka COVID-19 ah laga heley Soomaaliya.
Previous articleDEG DEG: Kenya oo is-dhiibtay kuna wareejisay Badda Somalia &shir deg deg ah oo ka socda XALANE+XOG.
Next articleCiidamada xoogga Dalka oo gaari qarax siday ku gubey Gobolka Sh/hoose.